विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता : रोकिएला हङकङकाे आन्दोलन ? « Naya Page
विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता : रोकिएला हङकङकाे आन्दोलन ?
प्रकाशित मिति :4September, 2019 5:40 pm
काठमाडौं, १८ भदौ : हङकङकी नेतृ क्यारी लामले विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी छन् । तीन महिना लामो राजनीतिक संकटपछि बुधबार नेतृ लामले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी हुन् ।
प्रस्तावित विधेयक विधायिका परिषद्मा छलफलअघि नै विरोध भएपछि जुन १५ का दिन कार्यकारी प्रमुख लामले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थगित गरिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
विधेयक फिर्ताले त्यहाँको अस्थिरता रोकिन्छ वा रोकिँदैन भन्‍ने अहिले केही संकेत छैन । अचानक आएको यस्तो निर्णयले थप संशय उत्पन्न गराएको बताइएको छ । हङकङमा आन्दोलनका क्रममा एक हजार १८३ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने कतिपयलाई चरम यातना दिएको भन्दै हङकङबासीले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले निष्पक्ष छानबिनका लागि एक स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
गत वर्ष ताइवानमा गर्भवती गर्लफ्रेन्डको हत्या गरी हङकङ प्रवेश गरेका अभियुक्त चान तोङ–काईलाई सुपुर्दगी ऐनमा रहेको अपूर्णता (लुपहोल) का कारण सुपुर्दगी गर्न नसकिएको तर्कसहित संशोधनको लागि विधेयक तयार गरिएको थियो ।
एक देश, दुई प्रणालीको सिद्धान्तमा चलेका कारण चीन र हङकङका कानुन फरक छन् । सन् १९९७ मा ब्रिटेनबाट हङकङ आफ्नो अधिनमा ल्याउन चीनले परराष्ट्र र रक्षाका विषयमा बाहेक अरू विषयमा उसलाई बढी स्वायत्तता दिने वाचा गरेको थियो ।